မျှစ်ကြော် … မျှစ်ကြော် … အချစ်ကလေးနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မျှစ်ကြော် … မျှစ်ကြော် … အချစ်ကလေးနော်
မျှစ်ကြော် … မျှစ်ကြော် … အချစ်ကလေးနော်
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Jul 27, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 31 comments
”မိုးကလေးညိုလာရင် xxx လွမ်းမျက်ရည်လေးလည် xxx ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းကို xxx သတိရပါတယ် xxx ကျောင်းသွားအတူတူ xxx ကစားလည်းအတူပဲကွယ် xxx နှောင်းအတိတ်မှာ ပျော်စရာ xxx အောက်မေ့ပါသေးတယ်”
ခုတလော မနက်တိုင်းလိုလို မိုးကလေးစွေနေတတ်တယ်။ ပထမတန်းတက်နေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ကျောင်းထမင်းဘူးအမီထည့်ပေးဖို့ မိုးဖွဲတွေကြားမှာပဲ ဈေးကိုထွက်လာခဲ့တော့ မိုးဖွဲတွေကြားမှာပဲ ဈေးက အသက်ဝင်စည်ကားနေတယ်။ ထီးရောင်စုံတွေကြား တွန်းထိုးရင်း ရာသီစာ ပုစွန်ဖော့ချိတ်လေးတွေ တွေ့တာနဲ့ ပုစွန်ကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းရယ်ချက်မယ်၊ ပိုတဲ့ပုစွန်ကို မျှစ်ကြော်မယ် တွေးပြီး လိုအပ်တာတွေဝယ်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မျှစ်ကိုသတိထားရမယ်လေ။ ရန်ကုန်တစ်ခေါက် ရောက်တုန်းက ဆေးမဆိုးထားလောက်တဲ့ အဝါဖျော့ဖျော့ ပေါက်ပြီးသားမျှစ်တွေ ဈေးမှာ ဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဆေးဆိုးမျှစ်ရှောင်စရာမလိုတဲ့ ရန်ကုန်ကအိမ်ရှင်မတွေကို ဒီတစ်ခါတော့ အားကျ မိပြန်ရော။
ဒီတော့ ဈေးဆိုင်နောက်ဘက်တန်း မျှစ်ဒိုင်ဆီလျှောက်လာပြီး ခင်မင်ရင်းစွဲ မျှစ်သည်လေးဆီမှာပဲ ဆေးမဆိုးရသေးတဲ့မျှစ်၊ မပေါက်ရသေးတဲ့မျှစ်ကို ဝယ်တယ်။ အဝါဖျော့ဖျော့ နုနုထွားထွား စား ချင့်စရာ မျှစ်သုံးချောင်းဟာ ကျမလက်ထဲရောက်လာခဲ့ပြီ။
ငွေသုံးရာကို လှမ်းပေးရင်း ”မျှစ်တွေက ပြုတ်လိုက်တော့ ဝါသွားတာပေါ့နော်” လို့ အမှတ်တမဲ့မေးလိုက်မိတယ်။ မျှစ်သည်မိန်းကလေးက ”အစ်မ၊ မျှစ်ကပြုတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်စာကျွေးထားတာ” တဲ့။
”ဓာတ်စာဆိုတာ ဘာလဲ။ ဓာတ်မြေသြဇာလား”
”ဟင် ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဆေးမဆိုးထားဘူး မဟုတ်လား” လို့ ကျမထပ်မေးတယ်။
မိန်းကလေးက ” မျှစ်ကိုဆေးမဆိုးထားဘူး အစ်မ၊ ပြုတ်ထားတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်စာ လေးနည်းနည်းဖြူးထားမှ မျှစ်ကပျော့သွားတာ။ မဟုတ်ရင် မာတောင့်နေမှာပေါ့” တဲ့။
”မျှစ်က ပြုတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးလား”
ကျမရဲ့ ဒီမေးခွန်းမှာ မျှစ်သည်မိန်းကလေးဟာ ခပ်ပျင်းပျင်းလေးရယ်တယ်။ သြော် … အလည်း အတဲ့ကျမ။ ဒီလောက်မျှစ်တွေအများကြီးကို ဘယ်သူက ထင်းဖိုး မီးသွေးဖိုး အကုန်ခံပြီးပြုတ်မလဲ။
တစ်မြို့လုံးမှာ အသုံးမကျဆုံး အိမ်ရှင်မ ကျမကလွဲလို့ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်ဦးမလဲ။
ဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်း မထူးဘူး၊ ချက်ရတော့မယ်။ မျှစ်ကြော်ဆိုတာ ငယ်ကတည်းကစွဲခဲ့ရတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်။ ငယ်သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်က ကျမကိုပေးခဲ့တဲ့နာမည်။ မျှစ်ကြော် ဟင်းပွဲ နဲ့အတူ နှောင်းအတိတ်ရဲ့ပျော်စရာတွေ တွဲစပ်သီထားတယ်။ အသက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲကြီးလာ လာ၊ ပျော်စရာငယ်ဘဝကို မမေ့နိုင်သေးတာ မျိုးချစ်စိတ်တို့ရဲ့ အရင်းတည်ရာလို့ ခေါ်ရမလား။
ကပေါက်ကရောက်စိတ်တွေဟာ တလောက ကသောကမျော ဖတ်လိုက်ရတဲ့ Hard liner နဲ့ Soft liner ဆိုတဲ့ပို့စ်ဆီ ရောက်လာပြန်ပါရော။ အပြစ်ဆိုစရာမရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးရဲ့ ဆိုလို ရင်းကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ့် Role အတိုင်း ကိုယ်လုပ်နေကြရ တာဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်မှာ Soft liner တွေများလေ ကောင်းလေဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ဆောင်းပါးဟာ ပြဿနာနဲ့ အခြေအနေကို ချပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းနည်း Solution ကိုတော့ ရေးမထား။ သည်တော့လည်း တိုင်းပြည်ထဲက အမာတွေပျော့လာအောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါ့။ မျှစ်လို ဓာတ်စာကျွေးရင်ကောင်းမလား။ ကိုယ့် Role အတိုင်း ကိုယ်လုပ်ရင်း တိုင်းပြည်ကြီး ဒီအဆင့်ထိ ရောက်သွားခဲ့ပြီ။
ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းရင့်တဲ့ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ပါတီကြီးနှစ်ခု အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ကြ တယ်ဆိုတာ ကြက်ဥနဲ့ဘဲဥ ဈေးကွက်လုရသလို။ ပြည်သူတွေက ဘဲဥမရရင် ကြက်ဥကိုပဲ ကြော် စားမယ်၊ ပြုတ်စားမယ်၊ ချဉ်ရည်ဟင်းချက်စားမယ်။ ကြက်ဥနဲ့ဘဲဥ ပါတီကြီးနှစ်ခုဟာ Power balance ဖြစ်နေမယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာကတော့ ပါတီကြီးနှစ်ခု အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ် ဆိုတာ ဆေးဆိုးမျှစ်နဲ့ ရိုးရိုးမျှစ် ဈေးကွက်လုရသလို။
စာတော်တဲ့ ၁ဝတန်းကျောင်းသားတစ်ယောက် အစမ်းစာမေးပွဲတွေမှာ ထိပ်ကပြေးခဲ့ပြီး အတန်းတင်မှာ ကျသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် မြင်းကောင်းခွာလိပ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ကျတာကတော့ ကျတာအမှန်။ အစမ်းစာမေးပွဲတွေမှာ ထိပ်ကပြေးခဲ့တဲ့ ပါတီကြီးတစ်ခု အတန်းတင်ရောက်မှ ကျတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ညံ့တယ်လို့ ရှင်းရှင်းပြောမှာလဲကွယ်။ Hard liner တွေများတယ်၊ ပြည်သူတွေ ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရ ရတယ် စသဖြင့်ပြောကြမယ်။ ပြီးရင်တော့ လာမယ်လေ သိပ်လှနေတဲ့ ကာလာခြယ်ဆေးဆိုးမျှစ်။
အယ် … မျှစ်ဋီကာချဲ့နေလိုက်တာ မိုးတောင်စဲသွားခဲ့ပေါ့။ ငယ်တုန်းက စားခဲ့ရတဲ့မျှစ်နဲ့တူအောင် အခုဝယ်လာတဲ့မျှစ်ကိုလည်း အထပ်ထပ်ပြုတ်ပြီး ရေတွေသွန်ပစ်လိုက်ရင် မျှစ်ထဲစိမ့်ဝင်နေတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာတွေ လျော့ကျသွားတန်ကောင်းပါရဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ အဆိပ်အတောက် ကင်းစင်တဲ့ အရိုးခံ ငယ်ချစ်မျှစ်လေးကိုတော့ အလွမ်းစာရင်းထဲ ထည့်သွင်းလိုက်ရပါတော့မယ်။
”ဝဿန်မိုးလေးစဲရင် xxx ရင်ခွင်ထဲဆွေးကာ xxx ကလေးဘဝက xxx မျှစ်ကလေးကို xxx သတိရမိတယ် xxx”
၂၇၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၃
ရောင်းတန်းဝင် အစားအစာ ဟင်းသီးဟင်ရွက် အသီးအနှံတွေ အားလုံးလိုလို အခုခေတ်မှာတော့ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲကာ ရောင်းလာကြတာဘဲနော်။ အဲလိုတွေ ကြားရ မြင်ရရင် ငယ်ငယ်တုန်းက စားခဲ့ရတဲ့ သဘာဝ အစားအစာလေးတွေကို သတိတရ လွမ်းမိပါရဲ့ဗျာ။
ခါတလေ ကျ လူ့သဘော အရ ……..
ရိုးရိုး ဆေးမဆိုး၊ ဓာတ်မကျွေးတဲ့ မျှစ် ကို ခု မဝင့်လို မတွေး၊ မဆန်းစစ်၊ မစိစစ်ပဲမရွေးချယ်ပဲ …
ငါတို့ အူတွေက အဆိပ်တွေ ပြီးနေပါပြီ ဗိုက်ကလည်း ဓာတု ဆေးတွေ ယဉ်ပါးနေပါပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့
ဓာတ်ကျွေးပြီး မျှစ်တွေကိုပဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ရွေးချယ်မိနေတော့မလားပဲ။
ကျနော်တို့ တစ်တွေ တစ်ခါတစ်လေ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် တွေးဖို့ လိုအပ်နေကြသလားးးးး
တူနီးရှား(အာရပ်စပရင်းစဖြစ်တည်ရာနိုင်ငံ) က.. ထိပ်တန်းအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမား.. လုပ်ကြံသတ်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့…
New York Times-Jul 25, 2013
TUNIS — Tunisia, birthplace of the Arab Spring revolutionary movement, was plunged intoanew political crisis on Thursday when assassins …
အော်… မမပြုံး မျစ်ကြော်စားလိုက်လို့ တူနီးရှား(အာရပ်စပရင်းစဖြစ်တည်ရာနိုင်ငံ) က.. ထိပ်တန်းအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမား.. လုပ်ကြံသတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့…..
Hard liner နဲ့ Soft liner တော့ ဉာဏ်မမှီလို့ မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး… မပြုံး ရယ်
မျှစ်ကတော့ မနေ့ညကတင် ငါးနဲ့ ချဉ်စပ်ချက်စားထားတာမို့ အမှတ်တရ ခင်ဗျ…
နယ်က ငါးဒိုင်တွေ ရန်ကုန် ဗဟိုငါးဈေးကို ငါး ပုဇွန် ပို့ရင်၊ ကြားမှာ ဓာတ်မြေဩဇာအိပ်ပါးလေးတွေနဲ့ထပ်၊ ရေခဲအုပ်ပြီးပို့တာခင်ဗျ။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ စိမ်းစို လတ်ဆတ်ပြီး အခုမှ ရေထဲက ဖမ်းလာတဲ့စတိုင် ပေါက်နေတာ၊ ငါးဈေးမှာ သွားသာကြည့်ဗျို့။ မြန်မာတွေ ဓာတ်မြေဩဇာကို အသုံးချတတ်ပုံ…
ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးမိတာက၊ အဲဒီလို ဓာတ်တွေစားရလို့လားမသိ၊ ရန်ကုန်က သူငယ်မတွေ ထွားလာပုံများ၊ ခေတ်ဆွေးအဆိုတော်ကြီး “ဘိုဘိုဟန်” သီချင်းလို “ပြားချပ်ချပ်” မဟုတ်… မဟုတ်
ဟီ ဟိ ဗိုက်ခေါက်ဆွဲခံထိတော့မယ်
အခုတလော အိမ်မှာ မျှစ်ကို အမျိုးမျိုး လုပ်စားနေတယ်။
ဒီတစ်ပတ် မျှစ်စားရတာ ပိုများနေတယ်ဗျ
သူ့ဟာသူ ဓာတ်ပြုပြီး အဆိပ်ပြီး နေတယ်ထင့်
(နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားခဲ့တဲ့ မုန်ညင်းတောင် မချိုတော့တာ ကြာပေါ့)
မျစ်ဆိုလို့ မျစ်ဒုက္ခကြော်နည်းရေး ရေးအုန်းမယ်
ကိုယ်ဝန်သည်မို့ စားရဘူးတဲ့ …. စားချင်တာ …
ပထမဆုံး ပုစွန်ကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်း နဲ့ မျှစ်ကြော် ကို ပြေးမြင်လိုက်မိပြီး သွားရည်တမြားမြား နဲ့ပေါ့။
ပြုံး ပြောတဲ့ “စာမေးပွဲ” ကို ကွန့် ကြည့်မယ်။
နိုင်ငံ ရဲ့ အရေး နဲ့ နှိုင်းမှာမို့ တစ်ဦးချင်းထက် တစ်ကျောင်းလုံး အောင်ချက် ဆိုတာ နဲ့ ပြောရင်ပိုကောင်းမလား လို့။
ကျောင်း အနေ နဲ့ အောင်ချက် ကောင်းချင်ရင်တော့ ကိုယ်တင်မက ဘေးက အားနည်း တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုပါ လက်တွဲ ခေါ် မှ ကျောင်းလုံးကျွတ် အောင်နိုင်မှာ ထင်ရဲ့။
အဲဒီလို လက်တွဲ ခေါ်တာမှာလဲ ကိုယ့်စာ ကို အလွယ်ပြ ခိုးချ ခိုင်းမှာလား?
သူတကယ် ဘဲ ရေရှည် ပြသနာ ဖြေရှင်းနိုင်အောင် နားလည် တဲ့ အထိ ရှင်းပြ ပေးပြီး သူ့ ကိုယ်တိုင် အားထုတ် မှု နဲ့ အောင်စေဖို့ ကြိုးစားမလား?
ပြီးပြီးရော ငါ့ စာထဲ ကသာ ခိုးကြည့် ဆိုတာ ကတော့ ကြိုးစားမှု မပါဘဲ လွယ်လွယ်နဲ့ အောင်တော့ သွားမှာပေါ့။
နောင်အခါမှာသာ စာမကျေ ဘဲ အခြေအနေ ပိုဆိုး ဖို့ များပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ အားလုံး ကိုပါ နားလည်အောင် ကြိုးစားစေပြီး စာမေးခန်း ဝင်ရတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
ကျောင်းအောင်ချက်ကောင်း ဖို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်း စီ က ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ယူကြတာပေါ့။
အဲဒီ အတွက် စာတော်သူတွေ က မလိုက်နိုင်သူ တွေ ကို ဖေးမ ဖို့ အများကြီး လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ ပါဝါ ရှိသူတွေ ထဲမှာ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်အတွက်လဲ အောင်စေ၊ သူများတွေလဲ အောင်စေ စိတ် နဲ့ လုပ်နိုင်ရင်တော့ မတိုးတက်စရာ မရှိပါဘူး။
တတိယ ကို ဆွေးနွေးရရင်ဖြင့်
” ဆေးဆိုးမျှစ်နဲ့ ရိုးရိုးမျှစ်”။
အဲဒါကတော့ စားသုံးသူတွေ ရဲ့ အသိ နဲ့ ခံယူချက်ပါဘဲ။
တစ်ချို့က အစားအသောက်တွေ မှာ ကိုယ့် ကို ဒုက္ခပေးနေတတ်တဲ့ အရာတွေ ပါနေတာ သိ ကိုမသိတာ။
(ပညာ ပေးရင် ရှောင်နိုင်ပါတယ်)
တစ်ချို့က အစားအသောက်တွေ မှာ ကိုယ့် ကို ဒုက္ခပေးနေတတ်တဲ့ အရာတွေ ပါနေတာ သိ လဲ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဈေးချိုတာမို့ အန္တရာယ် ကို ဂရုမထား ဘဲ စားနေရတာ။
(ပညာ ပေးတာမှာ ပိုပြီး အသေးစိတ် ပြော၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီလို အန္တရာယ် ရှိမဲ့ အစားတွေ ဈေးကွက်ထဲ မရောက်အောင်ပိတ်)
တစ်ချို့က အစားအသောက်တွေ မှာ ကိုယ့် ကို ဒုက္ခပေးနေတတ်တဲ့ အရာတွေ ပါနေတာ သိ၊ ပိုက်ဆံ လဲ ရှိ၊ တမင် ကို အန္တရာယ် ကို ဝယ်နေကြတာ။
(ပညာ ပေးတာမှာ ပိုပြီး အသေးစိတ် ပြောလဲ ဂရုစိုက်တာ မဟုတ်၊ ပိုက်ဆံရှိလို့ မရရအောင် ဝယ် သုံး မှာဘဲ၊ သူ့ထိုက် သူ့ကံ ပေါ့၊ ဖြစ်လာလဲ ငွေ နဲ့ ဆက် ဆေးကု နိုင်တာဘဲ)
ဒီမှာလဲ အပေါ်က သဘောပါဘဲ။
အန္တရာယ် သိရက်တာမို့ မစားတဲ့ သူတွေ ကိုယ်မစားသလို နီးစပ်ရာတွေ ကိုလဲ မစားဖို့ မပြောသင့်ပေဖူးလား။
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ စာမေးပွဲ အောင်ရင်ပြီးရော ကျောင်း ကို ဂရုမစိုက် တဲ့ သူတွေ
အများကို အောင်ဖို့ ကိုယ့်ဆီကစာဘဲ ခိုးချခိုင်း တဲ့ လူတွေ
အစား ကို ကိုယ်က အန္တရာယ် ကင်းအောင် စားတတ်ပေမဲ့ အများ ကို ပညာမဖြန့်ချင်တဲ့ သူတွေ
သူများ ကို တားဖို့ မပြော နဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်က လျှာအရသာမှာ နစ်ပြီး အန္တရာယ် လဲ နောက်မှ ကု မဲ့သူတွေ …..
၂၀၁၅ မှာ အဲဒီ လို လူတွေ စိတ်ဓာတ် အနည်း အများ ပေါ် မူတည် ပြီး ရလာဒ် ထွက်မှာပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ ဒီမိုကရေစီ စံ နှုန်း အတိုင်း ဘဲ အများ သဘော အတိုင်း ကိုယ့်ကို ခေါင်းဆောင် မဲ့ သူ ရွေးခွင့် ရမှာပါ။
ဒါကိုမှ မှန်ကန်တဲ့ သူကို မရွေးနိုင်အောင် အသိတွေ မဲ့ နေမယ်၊
အားလုံး တစ်ပြေးညီပါလာဖို့ လဲ ဘယ်သူမှ မကြိုးစား ဘူး။
အာဏာရှင် တွေ ဘယ်သူတွေ ဆိုတာ သိတယ်။
ဒါကို ညီညီညာညာ မဖြုတ်နိုင်ဘဲ လမ်းလွှဲ တာ ကို သိသိကြီးခံ နေကြ ရင်တော့
ကိုယ်နဲ့ ထိုက်ရာ ဘဲ လို့သာ မှတ်ရတော့ မှာပါဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်ထဲ ပေါ် ကို ပုံထားလို့ ကတော့ ဘယ်လိုမှ မရွေ့နိုင်ပါ။
ကိုယ်တိုင် လဲ တွန်းဖို့လိုမယ်။တွန်းမဲ့ လားရာ လဲ တူဖို့ လိုမယ်။
ဆေးဆိုးပန်းရိုက် အစာတွေ ကို သိသိကြီး နဲ့ ဆက်ပြီး စားနေရမှာပါဘဲ။
ကျွန်တော်လည်း မျှစ်ဆိုတဲ့ နီနီဝါဝါ ဆေးဆိုးထားတဲ့
လူကို အရစ်ကျနဲ့ သတ်မယ့်
မနေ့က အိမ်မှာ ၀က်သားနဲ့ မျှစ်ချဉ်ချက်တယ်။ခုတလော ခေါင်းမူးသလို ကိုက်သလိုဖြစ်နေတော့ မစားရဲဘူး၊ပဲသီးကြော်လေးနဲ့ပဲ စားလိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့ မျှစ်နုနုလေးတွေနဲ့ အိမ်မှာတင်ပြုတ်တဲ့(ဆော်ဒါမပါ)ပဲပြုတ်ကြော်တော့ မေတ္တာရှိရင်းစွဲမို့ လွဲနိုင်ပါဘူးမျှစ်ရယ် ဆိုပြီး အားရပါးရစားလိုက်တာပေါ့။မျှစ်ကိုလည်း ဈေးထဲက ဆေးမဆိုးတာပဲ ၀ယ်လေ့ရှိတာလေ။
ခု ထမင်းစားပွဲကထ ကွန်ပူတာစားပွဲပြောင်းတော့မှ မျှစ်အတ္ထုပ္ပတ္တိအစုံကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ရင်ထုမနာ။
(ဒီတိုင်းပြည်မှာကတော့ ပါတီကြီးနှစ်ခု အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ် ဆိုတာ ဆေးဆိုးမျှစ်နဲ့ ရိုးရိုးမျှစ် ဈေးကွက်လုရသလို။)
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဥပမာပါလား လစ်လစ်ရယ်။
တစ်တစ်ရဲ့ ကွန်မန့်ကလည်း တော်တော်စုံနေတော့ စကားတွေ မထပ်တော့ပါဘူး။
၁နှစ်ကျော်သာ အချိန်ရတော့တဲ့ကြားမှာ ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အာ့ခလိစ် လို ခြေဖနောင့်ကကိုင်ပြီး နတ်ရေကန်ထဲသာချပေးလိုက်ချင်တော့တာပါပဲ။
ရွာထိပ်က အိုးကြီးထဲ အရက်၁ပုလင်းစီလာထည့်ခိုင်းတော့ ငါတစ်ယောက် ရေရောရုံနဲ့ မသိသာပါဘူးဆိုပြီး
နောက်ဆုံး ရေတွေချည်းဖြစ်နေတဲ့ ရွာသားတွေလို ကျမတို့ မဖြစ်ကြဖို့ လူတိုင်းကိုယ်စီ တာဝန်သိကြဖို့ လိုနေပါပြီ။
နည်နည်း အားပိုစိုက်ြကဖို့လည်း အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတွေ မြည်နေပါတယ်။
သူကြီးသတိပေးတဲ့အတိုင်း တူနီးရှားလို မဖြစ်ဖို့လည်း အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေ သတိရှိပေးကြပါ။
ခေါင်းမာတဲ့ အဖေတူ သမီးကတော့ ဒါတွေ တောင်းဆိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အသက် ၄၀ ကျော်လာသော အမျိုးသမီးများ မှို နဲ့ မျှစ် စားခြင်းကို လျော့နိုင်လေ ကောင်းလေပါ။
ဘာလို့လဲဆို သွေဆုံးတဲ့အခါ မဆင်မချင်အစားများတဲ့သူဟာ မီယပ်ကျိုး ကျိုးနိုင်ကာ ညောင်းညာကိုက်ခဲ
ဟိုဘက်မှာလည်း တွေ့ပီးပြီ ..မှိုနဲ့ မျှစ်ကို ဘောက်မဲ့ကြောင့် တွဲတွဲပြောနေကြသတုံးကိုယ့်ဆြာတို့..
ပါဝင်ပစ္စည်း ရှာဖတ်ကြည့်ရင် အကွဲကြီးပါနော..။
ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်မှုများတာတွေ anti-oxident ဖြစ်တာတွေ သွေးတိုးကျစေတာတွေ ၀မ်းကောင်းဖို့အတွက် အမျှင်ဓါတ် ထောက်ပံ့မှုတွေ
LDL လျော့ကျစေတာတွေ ကောင်းတာတွေချည်း ပါဝင်မှုများတဲ့ (ဆေးမဆိုး ဓါတ်စာမကျွေးပေါ့လေ) မျှစ်ကို
သူနဲ့ အမျိုးနည်းနည်းမှ မတော်တဲ့ မှိုနဲ့ တွဲဖက်ပြီး မမြင်စေလိုပါကြောင်းရယ်။
P.S မဆင်မခြင်စားတာကတော့ .. ရေတောင် စွတ်သောက်ရင် သေတတ်သေးတာပဲကိုးဗျာ..
ကျွန်တော်ရေးတာ မယုံရင် Min Zarni ရေ မိန်းမများရရင်(သို့)ရှိရင် LDL ကျဖို့ မှိုလေး ကို ပုံမှန်ကျွေးကြည့်ပါလား။ လက်တွေ့သိရတာပေါ့ဗျာ။
LDL လျော့ကျစေတာတွေ ကောင်းတာတွေချည်း ပါဝင်မှုများတဲ့ (ဆေးမဆိုး ဓါတ်စာမကျွေးပေါ့လေ) မျှစ်ကို…
မှိုက LDL ကျတယ် ပြောခဲ့လို့လား ကွယ်.. (မျှစ်နဲ့ မှို ခုမှတွေ့တာ..)
စိတ်ဝင်စားရင် ..ဗိုက်တာမင် ဒီ ရယ် မီနိုပေါ့စ် ရယ် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေ ..ရှာဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ..။
ကိုခင်ခ၊ မခိုင်ဇာ၊ ဦးမာဃ၊ မရင်ငြိမ်းနွေ
ကွန်မင့်အပြန်နောက်ကျတာ သီးခံပါနော်။ မအူပင်မှာ လ၀က် (၁၅ရက်) အတွင်းမှာ မီးလာတာ ၃ရက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒီ ၃ရက်ဆိုတာက တစ်နေ့လုံးအပြည့်မဟုတ်ဘူး။ ပို့စ်လေးတင်ပြီးတာနဲ့ မီးကပျက်သွားတာ။ ဂဇက်ကို ဖတ်ရတာလည်း နောက်က ကျားလိုက်သလို ဖတ်ရတာ။ ပို့စ်တွေ အကုန်ဘယ်တုန်းကမှ မဖတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အစ်မ အမြဲတမ်း ကွန်မင့်အပြန်နောက်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်မင့်တွေကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းမျှော်နေတတ်တာ။
ဦးကျောက်စ် တို့လည်း အတွေးအခေါ်တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဆွဲယူတွေးနည်းပေါ့။
ပြုံးတို့က ကိုယ့်သားသမီးအပါအ၀င် မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ရင်းထားရတာပါ။ ဘ၀နဲ့ အသက် ဘယ်ဟာက တန်ဖိုးပိုရှိလဲ။
ပြီးတော့ မေစုကို ဒါမျိုးလုပ်လို့ မရဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်တို့တုန်းကလို ပြီးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ မေစုက နောက်ခံ ပါဝါကြီးတယ်။ သူတို့ပဲ ကဒါဖီ လမ်းစဉ်လိုက်သွားရလိမ့်မယ်။
လစ်လစ် ငယ်တုန်းက အတန်းပေါင်းစုံမှာ ပထမစွဲခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ အမုန်းတွေကို စပြီးခံယူခဲ့ဖူးတာ။ နောက်တော့ အတန်းထဲမှာ အဆင့် ၁ မရအောင် တမင်ဖြေခဲ့တယ်။ ၂မှာပဲ နေခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အက်ဆေးရေးရင်လည်း ဆရာမ မငြိုငြင်အောင် အမြဲလျှော့ပြီး ရေးခဲ့တယ်။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကိုယ်ဘယ်လောက်ညံ့တယ်ဆိုတာ ပေါ်တယ်။ ၁နေရာမှာ သတ္တိရှိရှိ မနေခဲ့ဘူး။
မေစုကိုလည်း ၁နေရာမှာ သတ္တိရှိရှိ နေစေချင်တာပါ။ ၂နှစ်ပဲ လိုတော့တယ်။ အခွင့်အရေးဆိုတာ တစ်ကြိမ်ပဲလာတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အခွင့်အရေးဆိုတာ ဒီတစ်ကြိမ်ပဲရှိတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်စောင့် မယ်ဆိုရင် မေစု အသက်သိပ်ကြီးသွားပြီ။ ပါတီကြီး အတွင်းအပြင် ဘက်စုံအားကောင်းစေချင်တယ်။
အတန်းတင်မှာ မအောင်ဘူးဆိုတာနဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဘူးတောင်းနစ်ပြီး ဇောင်းခြမ်းပေါ်ပြီမို့လို့ ဘာမှ မျှော်လင့်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။
တစ်တစ်က မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်ကို လျှောက်စေချင်တယ်။
လစ်လစ်က ဘယ်လိုလျှောက်လျှောက် ရလဒ်ကောင်းစေချင်တယ်။ ရလဒ်ကောင်းရင် ပြီးရောပဲ။ ကျန်တာ နောက်မှ ကြည့်ရှင်းမယ်။
ရလဒ်ကောင်းဖို့ဆိုတာမှာ အမာတွေ ပျော့လာအောင် စောင့်လို့မရ၊ အမာတွေ အမာအတိုင်းထားပြီး သိမ်းသွင်းနိုင်ရမှာ။
ရန်ကုန်မှာက မျှစ်တွေ ဆေးသိပ်မဆိုးကြဘူး။ ရေခဲသုံးနိုင်ကြလို့ပါ။ အိမ်ရှင်မတွေကလည်း ရေခဲသေတ္တာ သုံးကြတော့ ဈေးသွားတာနဲ့ မျှစ်ဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားတော့ မျှစ်က မဲမသွားဘူး။ နယ်မှာကတော့ ရေခဲသေတ္တာ မသုံးကြတော့ မျှစ်ကို လိုအပ်မှဝယ်တယ်။ ဆိုင်ပေါ်မှာ တင်ထားရတဲ့ ရက်ကြာတယ်။ ဒါကြောင့် မဲမသွားအောင် ဆေးဆိုးရတယ်။ မျှစ်ချဉ်ကိုတောင် အဖြူရောင် ဆေးဆိုးရပါတယ်။ ဆေးမဆိုးရင် မျှစ်ဆိုင် အရင်းပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ ကောင်မလေးက ပြောတာ။
အန်တီပြုံး ဟိုဘက်မှာ လိုရင်းကို ပြန်မဖြေပေးလို့ … ဆရာတွေ မျက်နှာတယ်လိုက်ပါလားလို့ သိမ်ငယ်မိတယ်
တကယ်ရယ်ပါ … ကျနော်တို့ အများကြီး ကြိုးစားရလိမ့် အုံးမပေါ့
ဇဂါးမစပ် … မအူပင်ဆို သင်းသင်းယုလှိုင်လေးကို လွမ်းထှာ … ဟိဟိ
မအူပင်မှာ ကျနော် ၁နှစ်ကျော် နေခဲ့ဖူးသဗျ …
ကိုရဲစည်ရေ မအူပင်က သင်းသင်း ကလည်း သတိရနေပါတယ်တဲ့ ဟိဟိ။
မျှစ် နဲ့ နိုင်ငံရေး တွေးလည်းတွေးတတ်ပါပေ့ဗျာ
ဘာပြောပြော ကျုပ်တို့ တတွေတော့
တစ်နေ့ အဆိပ်နဲနဲ စားလာလိုက်ကြတာ
ဒါကြောင့် အဆိပ်သောက်သေမှု တော်တော်များများ
ဒါဆိုရင်တော့ တောရွာဓလေ့လေးက ပိုကောင်းသွားပြန်ရောနော်… ရွာကိုတောင် အပြေးပြန်ချင်မိတယ်။ မျှစ်အကြောင်းကို စဉ်းစားမိလို့ပြောပါတယ်… ဒီမိုကရေစီဖက်ရောက်လာတော့ ညာဏ်တမိုက်တထွာ မမှီသေးလို့ … မေမေချက်ကျွေးတဲ့ မျှစ်ချဉ်စပ်ဟင်းလေးကို တမ်းတမိရကြောင်းပါ ရွာထိပ်က မမပြုံးရေ…
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မေမေချက်ကျွေးတဲ့ မျှစ်ချဉ်စပ်ဟင်းလေးပါ။ မျှစ်ချဉ်စပ်ဟင်းလေးကို ချစ်သလို ဒီမိုကရေစီကိုလည်း ချစ်နော်။ ဘ၀တွေကို ကယ်မှာ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မဟုတ်တဲ့ ဒီမိုလေးပါ။
2010 ကျနော်မိုးကုတ်သွားတော့ မျှစ်တွေလှိုင်လှိုင်ပေါ်တဲ့အချိန်
မျှစ်ချိုး ပြန်လာသူတွေရဲ့ ပလိုင်းထဲမှာမျှစ်တွေဖြူဖြူဖွေးဖွေး
လမ်းဘေးက မျစ်ဒိုင်တွေမှာ မျှစ်တွေများပုံထားလိုက်တာ ဒင်းကြမ်း.
1978 ဖောင်ကြိးရောက်တော့ တောထဲမျှစ်ဝင်ချိုးတော့ စူးလိုက်တဲ့ ၀ါးမွှေး။
မျှစ်အကြောင်းပြောတော့ နိုင်ဝင်းဆွေရဲ့ ၀တ္တုလေးကိုသတိရမိတယ်
လေးပေါက် – ဒီပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က တစ်ခါတုန်းက လေးပေါက် ပေးခဲ့တဲ့ကွန်မင့်နော်။ မှတ်မိလား။
ဦးကြီးမိုက်၊ အလက်ဇင်း – ကွန်မင့်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။
မစ္စတာဂီ – မြန်မာတွေက မျှစ်ကို သွေးတိုးတယ်လို့ ယူဆထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေကို မျှစ်လုံးဝရှောင်ခိုင်း တယ်။ အံ့သြစရာပဲနော်။ စကားမစပ် မစ္စတာဂီရဲ့ လိုဂို ပုံလေးက တစ်မျိုးလေးပဲ။ ကြယ်ပုံလေးနောက်မှာ စာတွေရေးထားတယ်။ A hires for A+ ဆိုတာလေး အားရင်ရှင်းပြပါလား။ မသိလို့မေးတာကို ဖြေမပေးဘူးဆိုတာမျိုး သမီးသိပ်မုန်းတာပဲ ဒယ်ဒီ။
May beacopy/paste saying from Chinese medicinal thinking. They said Shoots are cold food not suitable for postpartum women.
Recently it’s widely accepted asaTaboo coz shoots have gr8 effects to clear blood level and regulates and control levels of menstrutation periods. Women can use asagood daily food intake. (Limitation is up to the user)
Mushrooms hold different background/ story
Managers should hire better staffs than they are.
It wasasaying that Guy Kawasaki introduced firstly
Who was widely regarded as the father of “evangelism marketing”
Concept to the PC world. He said above words coz he marketed Macintosh to the world under the governance of Mighty Steve.
There is another saying he postulated. “IfaA Player start hiringaB player, it’s Bozo explosion ”
Accumulation of idiots တဲ့.
မအားဆို. အဲ့သည့်နှင်းဆီဖူးလေးတွေကို ကျနော်တအားချစ်တယ်
လိုဂိုက ကြယ်ပုံက color wheel ဗျ…
အရောင်တွေမှာ မိတ်ဖက်အရောင်တွေ ဆန့်ကျင်တာတွေ တော်လှန်တာတွေ ပေါင်းစီးတာတွေ ရှိတယ်..
(ဒီစာတွေကို ဟို ဘဲခေါင်းစိမ်း အပြာရောင် ဖင်ကောက် လေး မတွေ့ဇီယ)
မော်ဒန် စိနပြည်တည်ထောင်တော့ ပန်းချီဆြာတွေက အနီရောင် ၃၂ရောင်ကို ဥက္ကဌကြီးမော် ကို ပြပါသတဲ့
မော်က ရွေးလိုက်တာ အနီရောင် နံပါတ် ၂၁ တဲ့ဗျ…။
ကျနော် Branding ဘက် ပြန်သွားနေလို့ ..အရောင်ကိစ္စ နည်းနည်း ဆန်းဆန်းတင့် ဖြစ်နေပါဂျောင်း…။
စာကို ၀င်ဖတ်လိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ အကြိမ်ပေါင်းများနေပြီ။
ကိုယ်မမီတဲ့အရာတွေ ထားပြီး ကိုယ်မီတာ ရေးရရင်တော့…
နယ်တွေမှာ ချိုးထားတဲ့မျှစ်အစိမ်းကိုဝယ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာပြုတ်စားတာ အန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မယ် လစ်လစ်ပြုံးရေ။
နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံး ဆိုတဲ့စကားလည်း ရှိတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုယ်တာဝန်ယူချင်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုဘက်က ကိုရဲစည်ရဲ့ မျှစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲက မျှစ်ကိုမပြုတ်မှာ မပူရဘူး ဆိုတဲ့ စာကြောင့် ဈေးထဲကို ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းခဲ့တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကွန်မင့်ပြန်ဝင်တာ ကြာသွားတာပါ။
ဒီပို့စ်မှာ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလို မျှစ်သည်မလေးနဲ့ စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ ရေးထားတယ်။ တကယ်က အဲလို မဟုတ်ဘူး။ မျှစ်သည်ကောင်မလေးက ကျမအိမ်မှာ အချိန်ပိုင်းလာကူပေးတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ ဒါကြောင့် မျှစ်တွေ အကြောင်း ကျမသိရပြီး ရေးနိုင်တာပါ။ ဈေးထဲ သူနဲ့အတူသွားတော့ ဓာတ်စာကျွေးမျှစ်ကို သူပြတယ်။ ၀ါညစ်ညစ် ၀ါရော်ရော်လေ။ မျက်စိယဉ်ပြီးလူမှ သိတယ်။ ပြုတ်ထားတဲ့မျှစ်ကတော့ အ၀ါကြည်ကြည်လေးပါ။ မျှစ်တွေ အားလုံးနီးပါး ဓာတ်စာကျွေးထားတယ်။ မပေါက်ရသေးတဲ့မျှစ် မှန်သမျှ ဓာတ်စာကျွေးထားတယ်။ ပေါက်ပြီးသားမျှစ်မှာကတော့ ဓာတ်စာကျွေးမျှစ်က မာဆတ်ဆတ်လေးဖြစ်နေတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ တခြား မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က မျှစ်တွေတော့ ဘယ်လိုနေတယ် မသိ။ ဒီမှာကတော့ မျှစ်တွေကို ဓာတ်စာကျွေးတာ သေချာပါတယ်။
မျှစ်ချဉ်ကို အဖြူရောင်ဆေးဆိုးတယ်ဆိုတာ အဲဒီကောင်မလေး ပြောတာပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ရောင်းနေတာလေ။
နိုင်ငံဂျားတိုင်းပြည်တွေမှာ အခုလို အစားအစာ မသမာမှုဖြစ်ရင် သတင်းတွေ ဟုန်းခနဲထပြီး လုပ်တဲ့လူလည်း ထောင်ကျချင်ကျမယ်။ မကျရင် ဒဏ်ကြေးငွေပေးရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ဒီသတင်းလေးဟာ ဘာမှ မဖြစ်သလိုပဲ။ လူတိုင်းအတွက် သိပ်ရိုးနေပြိ။
မစ္စတာဂီရေ … A players hire A+ players. ဆိုတာ ရှင်းသွားပြီ။ ဒါလေးအတွက် ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်။
မမရေ … မျှစ်အစိမ်းက တစ်ခါတလေမှ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်နှစ်ရေလောက် ပြုတ်ရသလဲ မသိဘူး။ ရန်ကုန်ကမျှစ်တွေ ဘယ်လိုနေတယ်တော့ မသိဘူး။ မမတို့လို အစားအသောက်ပါရဂူ (မွှားသွားလို့ ) အချက်အပြုတ်ပါရဂူတွေ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရင် ပိုသိမယ်။ အခုဆို ဒိုင်တွေကလည်း လူစိမ်းအ၀င်မခံဘူး။ ဓာတ်ပုံအရိုက်မခံဘူး။ နားလည်တဲ့လူက ကြည့်ပြီး သတင်းပေးမှဖြစ်မှာ။
မနောကတော့ ခုထိ မေမေချက်ကြော်ကျွေးတဲ့ မျစ်ကြော်နှင့် ပဲပြုတ် စားနေတုန်းပါပဲ။ အရောင်အသွေးရဲရဲတောက် ၀ါထိန်ထိန်မျစ်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ သိနေပေမယ့်လည်း တစ်ခါတလေ စားမိနေတယ်။ ဘိုလိုလုပ်ရပါ့
အဖြစ်မှန်ကိုသိလျှက်နဲ့.. ပေတေဆက်လုပ်သူဟာ.. အမှားလုပ်သူတွေကို.. ထောက်ခံအားပေးနေတာနဲ့တူပါတယ်..
ပုံ။ ။ ကျုပ်
အင်း…ပြောရရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုးဆေး၊ဓါတ်မြေဩဇာနဲ့ဓါတုပစ္စည်း တွေသုံးထားတဲ့အစားသောက်တွေကို စစ်ဆေးအရေးယူမူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်…အသားကင်ဆိုင်တွေမှာ နီရဲအောင်ဆိုးထားတာမြင်ပါလျှက်နဲ့ ၀ယ်စားနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို၊မိဘတွေက အန္နရယ်ဖြစ်ကြောင်းကို သားသမီးသိအောင်သင်ပြပေးနိုင်တာသိပ်မတွေရဘူး…
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၉ The Voice Weekly
မြန်မာလူမျိုးများ အဓိက စားသုံးနေသော ငါးပိတွင် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ငါးပိနှင့် ပတ်သက်သော စီးပွားရေး လုပ်လိုသဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ငါးပိ ဝယ်ယူနိုင်ရန် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းက ကူညီရာတွင် ငါးပိများ၌ ဓာတ်မြေသြဇာများ ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားခြင်း ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဌာန FDA၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ဈေးများဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းတို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ယင်းဆွေးနွေးမှုများအရ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် ရှိ ညောင်ပင်လေးဈေးနှင့် ဒဂုံစင်တာသို့ သွားရောက်ကာ လေ့လာမှုများ စတင် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ကုန်စည်များ ဝင်ရောက်မှုကို လေ့လာရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရ မဟုတ်သော အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းကာ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဗအုပ်ခိုင်က ဆိုသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကင်ဆာရောဂါ ဒုတိယ အဖြစ်အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိမ်းစားငါးပိ၊ မျှင် ငါးပိ၊ ဒမင်း ငါးပိ၊ ရေကျို ငါးပိနှင့် ငါးပိကောင်များသည် အစားအများဆုံး ငါးပိများဖြစ်ပြီး ငါးကျည်း၊ ငါးခူ၊ ငါးရံ့၊ ငါးပြေမ၊ ငါးစင်ရိုင်း၊ ငါးခုံးမ စသည့် ငါးများကို ငါးပိ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။
ငါးမှ ငါးပိဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်ရန် ပုံမှန် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အတွင်း ကြာမြင့်သဖြင့် ငါးအရိုး အလွယ်တကူ ဆွေးမြည့်စေရန်အတွက် အသီးအနှံ ကြီးထွားစေရန် အသုံးပြုသော ဓာတ်မြေသြဇာတွင် ပါရှိသည့် အက်စစ်ဓာတ်ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
“အသီးအနှံကတော့ တစ်ဆင့် လူဆီ ကူးစက်တာလေ။ ငါးပိကျတော့ တိုက်ရိုက်ဆိုတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကလီစာတွေအတွက် စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာများ ပါဝင်သည် ဆိုသည့်အပေါ် ငါးပိ လုပ်ငန်းရှင် များက ၎င်းတို့ ငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာ ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းသို့ လာရောက် ပြောကြားမှုများ ရှိကြောင်း၊ လာရောက် စစ်ဆေးစေလိုသည်ဟု ကမ်းလှမ်းထားသော်လည်း သွားရောက် စစ်ဆေးမည် မဟုတ်ဘဲ ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ငါးပိများကိုသာ ရယူကာ ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် FDA သို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
အသီးအရွက်များ ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံးပြုသည့် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော Carcinogenic Activit သည် ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန် တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
စိမ်းစား ငါးပိနှင့် အခြား ငါးပိများတွင် ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သော အနီရောင် ဆိုးဆေးများ သုံးထားသည် ကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိရသဖြင့် ငါးပိ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသူများကို အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသော ဓာတုဆိုးဆေးများကို လုံးဝ အသုံးမပြုရန်နှင့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသား အစားအသောက် ဥပဒေအရ တရားစွဲဆို အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
သာမီးက မျှစ်ကြော်တော့ ကြိုက်ပု … ငါးပိရည်တော့ကြိုက်ဒယ်…
ဗိုက်ထဲတော့ ယူရီးယားဒွေဝင်နေတာ နှစ် ၂၀ ကျော်ပိပေါ့နော်…